Zonke opharetha mobile Sekuyisikhathi eside zibekiwe ukudluliswa umsebenzi imali kusuka kunombolo eyodwa kuya kwenye. Subscribers baye bakuthola Ukugunda kakhulu isici esisha, ngoba ikuvumela ukudlulisa imali kusuka egunjini eyodwa kuya kwenye ngaphakathi opharetha efanayo esimweni esibucayi. Kodwa ngakho-ke kwenzeka ukuthi kudingekile ukuba ngithume, isibonelo, imali "MTS" ukuze "Beeline". Kungenteka yini? Ingabe opharetha mobile esinjalo exchange? Ake siphenye. Kulesi sihloko sizobe sesibheka indlela ukuze uthumele imali "MTS" ukuze "Beeline". Eqinisweni, lena akunandaba ngempela. Kanye funda indlela ubuyise "Beeline" nge "MTS". Ungabi kahle ukuze sihlole izindlela ukuze uthumele imali ngaphakathi emakamelweni omunye weselula.
Standard ukudluliselwa imali phakathi izinombolo "Beeline"
Isevisi yokudlulisa imali "Beeline" ikuvumela ukuba uthumele imali ku-akhawunti eyodwa umsebenzisi akhawunti yelinye. Isevisi "ukudluliselwa Hambayo" sevisi itholakala kubo bonke abasebenzisi ukuxhumana "Beeline", ke akudingi kusebenze. lula yayo itholakala iqiniso ukuthi noma ngasiphi isikhathi, nge lemali edingekayo imali ku-akhawunti yeselula se ungathumela izimali kunoma abanye abasebenzisi ifoni abadinga "Beeline", kungaba tihlobo takhe, bangani, nje umuntu ojwayelene naye noma yebo umuntu ongaziwa. Kodwa ukudluliselwa imali komunye akhawunti mobile kwesinye Kwenziwa hhayi ngokushesha. Ukuze wenze lokhu, kufanele uthumele isicelo opharetha, bese uqinisekisa ukudluliswa ukusebenza imali. On ikhibhodi ukwenza, udinga inhlanganisela ezilandelayo: "*", bese usho ukuthi "145" bese "*", faka inombolo yefoni yomemukeli futhi, cindezela "*" likhombisa inani transfer, bese ucindezela "#" futhi inkinobho yokushaya ucingo . Inombolo yocingo kufanele icaciswe ngaphandle idijithi "8" noma "7", kanye nenani kumele libe inombolo ephelele, yize lokho lwemali inikezwe imali plan yakho.
Dlulisela imali ephakathi kwezinombolo "MTS"
Ukuze uthumele imali kusuka kunombolo eyodwa "MTS" Kunezindlela eziningana ukuze enye inombolo yefoni.
I zokubhalisa ungathumela isicelo elandelayo: "*", bese ufaka u-112, futhi "*" kubonisa isibalo zokubhalisa, okuyinto libala imali emuva, "*", sinquma inani abaphathi, cindezela "#" futhi inkinobho yokushaya. I-opharetha uye uzibekele ngokudlulisela tibalo - a esiphezulu ruble 300. Uma ufuna ukuthumela ngaphezulu, ungakwazi amdale uhlelo lokusebenza olufanayo. Njengoba esimweni ngokudluliswa kwesinghonghoyilo sabo "Biline" Kufanele ubonise, okuyinto inenombolo (isib ruble 200). Ngemva kuthunyelwa isicelo kumele beze nge operation ikhodi yokuqinisekisa. Uma ubhalisa isicelo sokudlulisa ukudala "*", bese 112 futhi "*" ibonisa ikhodi, cindezela "#" futhi inkinobho yokushaya. Isevisi ikhokhelwa - at isicelo esenzelwe ukudluliselwa imali kumthumeli i eyengeziwe 7 ruble kuzosuswa.
Ngo inkampani ka "MTS" has okukhethwa kukho ababhalisile enesihloko esithi "Dlulisa okuqondile". Yena (yokudlulisela) kungaba isikhangiso ejwayelekile noma hoc. Ngaphansi kwemibandela ye-Uhlobo lokuqala umsebenzisi sevisi ukusungula ukudluliselwa njalo imali kwenye inhlangano (kanye ngosuku, isonto, inyanga - timer ikuvumela ukuba ukhethe noma iyiphi imvamisa). Ukucupha yokudlulisela njalo kudingeka ukudayela ephathekayo, "*", bese 111, "*" Nalapha futhi, inombolo 7, cindezela "#" futhi inkinobho yokushaya. Ngenxa yalokho, iwindi lizovela ongakhetha imenyu. Chofoza "ngaphezulu", khetha "umthamo wemvula ejwayelekile", faka inombolo ye-umamukeli, khetha ukuvama yokukhokha (1 - usuku, 2 - masonto onke 3 - nyangazonke), ucacise ukudluliswa, ukuthumela isicelo. Ngokushesha ukuza nomlayezo kolwazi operation nokuvuma noma isizathu sokwenqaba. Ukuze ukudluliswa kwesikhathi esisodwa kwama-algorithm efanayo, kodwa imenyu kumelwe ukhethe "yesikhathi esisodwa umthamo wemvula."
Ukuze uthumele imali komunye umsebenzisi "MTS", ungathumela umyalezo enombolweni 9060. I-SMS kubonisa isibalo umamukeli kanye nenani idiphozi esikhaleni. Umlayezo impendulo izoqinisekisa ikhodi ukusebenza, okuyinto kumele ithunyelwe inombolo efanayo 9060.
Ukuze lesi simiso "MTS" ukuvumele ukwenza ukudluliselwa imali kwenye inhlangano, kumele ube i-akhawunti lemali kwefoni yakho, engeqile kuleyo ufuna ukudlulisa, 50 (futhi, kwezinye izifunda ruble 80-90). Phawula futhi ukuthi ukuhunyushwa kungenzeka kuphela ngaphakathi esifundeni esifanayo.
Njenganoma "MTS 'uphonse imali kwi" Beeline "?
Eqinisweni, kungaqali nzima. ukudluliselwa Imali nge "MTS" ukuze "Beeline" ngezindlela eziningana:
Indlela elula of ukudlulisa imali isikhokhelo ka "Beeline" - iwukuba ukuthumela umyalo esilandelayo uma ifoni: "*", bese 115, "#" futhi inkinobho yokushaya. Vula imenyu lapho ukhetha "Inkokhelo Easy", ngakho-ke isigaba "Umakhalekhukhwini", faka inombolo yomemukeli, esakhiwa kwamadijithi eziyishumi futhi zibonisa inani ukudluliswa. Ngemva ukubhalisa isicelo kumele wathola umyalezo ovela inombolo 6996. Thumela impendulo lo mlayezo kufanele kube okungenani imizuzu engu-15. Ukuqinisekisa ukusebenza, thumela i-SMS nanoma yimuphi wombhalo enombolweni 6996. Ukuthumela umlayezo anombhalo "0", ungakwazi ukhansele umsebenzi. Ngakho imali ungakwazi aphonse nge "MTS" ukuze "Beeline" futhi "megaphone". Ibhalansi encane emva ukudluliswa imali ababhalisile nezinye opharetha akufanele kube ruble angaphansi kuka-10, ngaphandle kwalokho uhlelo ngeke senqabe nokuqalisa ukusebenza. Kufanele kukhunjulwe ukuthi kwezinye imali tariff nokujikijela khulula kuya "MTS" ukuze "Beeline" ngeke isebenze - ikhomishini nokudluliswa 10% lemali. Yiziphi tariffs, xhumana no-opharetha wakho.
ukudluliselwa Imali nge "MTS" ukuze "Beeline" futhi "megaphone" kungaba ngenye indlela - nge indawo esemthethweni "MTS". Ukuze wenze lokhu, website yenkampani ukuya ekhasini "Ukukhokhela izimpahla kanye nezinsizakalo", khetha "Beeline" (noma "megaphone"), ucacise inombolo yefoni yomemukeli kanye nenani yokudlulisa. Ekhasini ofanayo "Kusuka ku-akhawunti MTS ifoni" ukuze uphawu bese uchofoze inkinobho "Okulandelayo" on the isigaba esilandelayo ukuhunyushwa. Esikhathini ewindini elisha Kufanele ufake inombolo yakho yocingo bese uchofoza "Thola iphasiwedi". Ocingweni Uyothola i-SMS nge-password, ngawo ungafaka iKhabhinethi wakho siqu kule sayithi. Ngaphezu kwalokho, kulandela uhlelo, udinga ukuqinisekisa inkokhelo. IKhomishana uzokwenza 10% lemali adlulisiwe.
Ukudluliswa izimali ezivela eziningi "Beeline" nge "MTS"
kakade Siye safunda indlela ukuze uthumele imali "MTS" ukuze "Beeline", manje cabanga inqubo reverse. Ingase futhi ngokuxoxa izindlela eziningana.
Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa "Beeline" iwebhusayithi ngokukhetha "Ukudluliswa izimali" kusukela uhlu opharetha kufanele ukhethe "MTS", ucacise inombolo yocingo, ukudluliswa lemali umamukeli bese ucindezela "Khokha". Entsha kwesikrini sokungena ngemvume udinga ukufaka "Beeline" inombolo yakho, faka iphasiwedi emkhakheni ezifanele, okuyinto izotholwa embikweni wombhalo. Manje, ngokuba kakade ku-akhawunti yakho, singakwazi kuphela ukuqinisekisa inkokhelo.
Kuyinto elula kakhulu ukufeza translation ne "Beeline" phezu "MTS" ngokuthumela i-SMS ku inombolo 7878. Isidumbu umyalezo ubonisa: MTS ke ufake isikhala, ucacise inombolo yefoni yomemukeli, futhi isikhala, faka imali yokudlulisa. Ukuphendula SMS izoqinisekisa ikhodi kumele ithunyelwe inombolo efanayo - 7878.
Njengoba ubona, opharetha mobile manje ubuhlobo wokubambisana mutual. Futhi ngokuqinisekile inenzuzo ababhalisile zabo. Ukuze uthumele imali opharetha inombolo eyodwa ngenombolo omunye akunzima, kodwa kusho ukuthi kukhona indlela kunoma isiphi isimo!
Indlela ukubiza eJalimane? Izinketho nalelo ukunambitheka
Izitho Excretory e mollusk. Isakhiwo shellfish